Forum serasera malagasy TENA lany tsy misy, tsy misy olona mahay intsony mihintsy eto Madagasikara - Dinika forum.serasera.org
TENA lany tsy misy, tsy misy olona mahay intsony mihintsy eto Madagasikara
Fitohizan'ny hafatra : TENA lany tsy misy, tsy misy olona mahay intsony mihintsy eto Madagasikara
endriny - 16/02/2017 07:15
mba vakio ange e.
Tapitra tamingana ny olona mahay eto Madagasikara fa ry Rhaj0 ilaozany mitsoaka any Canada.
Mon Dieu, les "hommes bleux sont en voie de disparition". (Ry Atra o, efa ho lany tamingana ny olomanga eto Madagasikara)
rhaj0 - 16/02/2017 15:20
Legoza aaa.. tena voatonona ilay anarako k'le... izaho angaha "olona mahay" (politika) izany ry Endriny.. zavatra TSY haiko izany. Koa na ny zava-misy ao Madagasikara azany betsaka no TSY haiko. i Endriny foana ihany no manitsy sy manoro ahy ny fomba amam-panao malagasy ohatra. Mampiresaka mizara ny tsapako sy hitako (avy aty Kanada) fotsiny aho eto.
endriny - 16/02/2017 16:06
Ka ianareo manam-pahaizana tanora toa mitsoaka daholo dia ry Dadabe sisa no omena lohalaharana amin'ny fitantanana ny firenena ity koa. Sady amin'izay Dadabe iray mitondra sehatra 3 be izao.
Hoy aho mananihany ny namana androany hoe: "tamin'ny 20 taona lasa nataontsika takoritsika I Dadabe Ratsiraka hoe tokony efa miala fa efa manao kosy (couche), fa ity izao misy Dadabe Leon mitovy taona amin'i Dadabe Ratsiraka"
ravatorano - 01/03/2017 08:32
endriny - 03/03/2017 07:21
Ny mahavariana dia io Dadabe Leon io had no lehiben'izany Conservation International izany aty @ ranomasim-be indianina. Kanefa dia manampy fanjakana mpangalatra bois de rose.
Tena lany olona isika zareo a
Tovorandria - 03/03/2017 21:22
Ts marina kosa zany oe lany olona mahay zany dago e. , be no manampahaizana sy tena competent ary mety hanandratra an i dago @ avo fa indrisy ny panao koli2 sy jiolahimboto fôna no mameno ny lapa satri tarana boanjo hono foto boanemba zany oe ny eo iany no eo d zay no ts mbola ahitana taratra an le olona mahay fa mbola mahasarona azy ireo
endriny - 24/03/2017 14:17
Ka ilay izy izany tsy hoe betsaka manam-pahaizana eto Madagasikara, fa ilay fitondrana mihintsy no vilam-pijery ka toa tsy mahita afa tsy adian'olona vitsy, izay ny teo aloha ihany raha mbola velona. Fa ny ambiny rehetra tsy ao anaty atontan'isa.
Ka tsy mahagaga intsony raha toa ka tsy mahita hevi-baovao intsony ny mpitondra sy ny mpanao politika. Satria tsy manana saina hivelatra.
I Rajao mba noheverina ihany fa hitondra soa amin'ny maha mpampianatra sy zanaka pasitera ary mpitantana azy. Saingy indrisy fa dia nanaraka ny fomba fampianarany koa ny fomba fitondrany: "Lesona efa tamin'ny 1980 ihany no asainy atao tsian-jery". Dia ny olona mpitantana tamin'ny 1980 ihany no antsoiny hoe manam-pahaizana.
Calinbrandon - 27/03/2017 16:24
Tsy resaka " lany olona manam-pahaizana " no izy, fa resaka olona ao anaty lisitra sa tsia.
Ny mpitondra ao Afrika sy eto Madagasikara dia tsy tongatonga ho azy. Arakaraka ny filan'ny matanjaka eto an-tany io. Ny olona hitondra eto dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny géopolitique sy géostratégie-ndry zalahy.
Nanomboka tamin'ny 1960 io. Tamin'izany dia natsangana aloha ny Padesm. Officiellement, ny dikan'ny Padesm amin'ny teny malagasy dia : "Firaisan'ny Tanindrana sy ny Mainty Enin-dreny ary ny Karazany rehetra eto Madagasikara" (jereo statuts du Padesm, indrindra fa ny article 7). Tsiranana no nofidian'ny vazaha ho filohan'ny Padesm sy ho Filohan'ny Repoblika satria, ankoatra ny maha Tanindrana azy, dia tsy manam-pahaizana firy izy ka azo taritina ary ny Tsimihety ihany koa no foko tsy manana Ampanjaka.
Dia ny avy amin'ny Padesm foana ary ny fianakavian'izy ireo no nofidian'ny Frantsay hitondra eto aloha raha mbola azo atao ( filoha, Praminisitra, minisitra, sénat, Assemblée nationale, ...) : Tsiranana, Zafimahova, Zafy Allbert, Velonjara (Ratsiraka), Emmanuel Rakotovahiny, fianakaviana Sylla, Ravony sy ny fianakaviany, ry zareo avy ao Morondava ( Istasse, Bory, Kolo, Vital, ...).
Tamin'ny 72, tokony i Monja na i Manandafy no nitondra satria ry zareo ireo no nitarika ny Tolona. Tsy nanaiky ny frantsay dia natsofony tampoka ny Général Ramanantsoa, izay olon'i Frantsa.
Avy eo, Ratsimandrava tsy maninona ho an'ny Frantsay raha hitondra satria Padesm ny rainy. Na avy eto Tanà aza izy, dia tsy naninona satria Mainty Enin-dreny (jereo ny boky nosoratan'i Mompera Zezoita Rémi Ralibera ) ary mifanaraka amin'ny article 7 des statuts du Padesm.
Tonga Ratsiraka, avy amin'ny Padesm. Tsy ho lany mihitsy i Soja t@ fifidianana tao @ Directoire, na inona nataony na inona.
Ravalomanana no tsy nampoizin'ny frantsay, ary notohanan'ny Etazoniana. Tsy maintsy noesorin'ny frantsay. Nosoloina an'i Andry Rajoelina izay manana fiaviana azon'ny frantsay ekena ary avec la bénédiction de Ratsiraka du Padesm (réunion tany Neuilly). Fa transition ihany.
Ny épisode Ratsirahonana dia mety amin'ny frantsay satria taranaky ny mpamadika ny sy mpanongam-panjakana teto Imerina hatrizay izy (Rasanjy, Rabibisoa, Andriantsilavo, ...sns ), izany hoe maimbomaimbo Andafiavaratra. Efa hain-dry zareo ireo mihitsy ny manongana ary olon'ny frantsa daholo izy ireo. Tsy tongatonga ho azy ny fananganana saina fotsy teny aan-dRova tamin'ny 1895.
Rehefa manomboka tsy dia misy intsony ny lisitra Padesm izay efa nofaritan'ny Françafrique sy ry Jacques Foccart tao amin'y lapan'ny Elysée, dia alaina ny Merina olon'ny frantsay ary tsy Andriana ( toa an-dry Hery Rajaonarimampianina ).
Matahotra mafy ny Frantsay mandraka ankehitriny fa ho foanan'ny Malagasy amin'izay ny Repoblika izay tsy fantatry ny 95 % -n'ny vahoaka hatramin'izao, ka ho averiny ny Fanjakana. Tadidio fa io resaka Fanjakana io no tsy hisian'ny adim-poko mihitsy eto Madagasikara, na dia misy mpanao politika midradradradra an'izany aza ankehitriny.
Fehiny : ny tokony lazaintsika sy ho ataontsika dia ny manakana ny vahoa na ny gejan'ny Frantsay. Tsy lany olona mahay eto. Fa ireo olona mahay kosa tsy te-hiditra amin'ny vahoan'ny mpanjanaka.
Fijery tsy mitanila ny ahy, koa anjaran''ny tsirairay ny mitsakotsako azy.
Mankasitraka namky hatramin'ny farany.
Tovorandria - 20/04/2017 19:07
Ka tsika zany no adala mety ho lalaovin ireo frantsay ireo ko, ny marimarina kokoa die ireo pitondra babakoto eto amitsika ireo no fositra, taitairina @ fatim bola kely d may er? d refa tonga eo d mamerim bola , manafim bola faran zay betsaka sy manorina villa b etsy sy eroa ôtran drajao sy rajoelina. Za tena tsy tia ary mankahala frantsay hatr@ zay mints.